Shabaab oo sheegtay inay hayaan Meydadkii ugu Badnaa Ciidamada Uganda – Xeernews24
Shabaab oo sheegtay inay hayaan Meydadkii ugu Badnaa Ciidamada Uganda
30. Juli 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Dagaalo culus ayaa maanta Ciidamada Amisom iyo Al Shabaab ku dhex maray inta u dhaxeyso Deegaanada Danow iyo Golweyn, iyadoona uu dagaalku uu barakaciyay dad aad u badan sidoo kalena waxyeelo ay ka soo gaadhay.
Ururka Al Shabaab, ayaa guulo la taaban karo ka sheegtay dagaaladaasi waxayna sheegeen inay hayaan meydadka 39 askari oo ka tirsan ciidamada Nabad Ilaalinta Midowga Afrika.
Dagaalkan wuxuu ka dambeeyay markii Shabaabku ay wadada u galeen kolonyo ay la socdeen Ciidanka Amisom oo ka amba baxay Danow, kuna sii jeeday Degmada Buulo Mareer.
Sarkaal u hadlay Ururka Al Shabaab, ayaa sheegay inay dagaalka ku dileen 39 ka mid ah Ciidanka Uganda ee qaybta ka ah Amisom, isla-markaana ay kala wareegeen hubkii ay wateen.
Taliska Ciidamada Amisom, ayaan ka hadlin dagaalka ay Shabaabku sheegeen inay ku dileen 50 ka mid ah ciidamadooda, waxaase jira warar madax bannaan oo sheegaya in dagaalkii maanta uu khasaaro buuran ka soo gaaray Ciidanka Uganda.
Waa weerarkii ugu khasaaraha badnaa oo Ciidanka Uganda ka soo gaadha Gobolka Shabellaha Hoose, tan iyo weerarkii 1-dii September ee sanadkii 2015-ka ka dhacay Degmada Janaale, kaasoo Ciidanka Uganda looga dilay ugu yaraan 50 askari.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2016/12/war.jpg 152 272 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-07-30 16:08:012017-07-30 16:08:01Shabaab oo sheegtay inay hayaan Meydadkii ugu Badnaa Ciidamada Uganda
DAAWO: Muuqaallo Naxdin Leh Oo Laga Helay Qaraxii Maanta Akris wanaagsan warqadi Ibrahim Cigaal uu Qoray raysal wasaarihi Yahuuda ee...